Naannoo Tigiraay: ‘Mootummaan lammiilee hidhaman hatattamaan gadhiisu qaba’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNaannoo Tigiraay: ‘Mootummaan lammiilee hidhaman hatattamaan gadhiisu qaba’
Naannoo Tigiraay: ‘Mootummaan lammiilee hidhaman hatattamaan gadhiisu qaba’
Wal gahii walta’insa humnoota federaalistii
(bbcafaanoromoo)—Mootummaan Naannoo Tigiraay motummaan Federaalaa lammiileen bilisummaan gara naannichaa akka hin dhufne dhorkaa jira jechuun komate.
Biiroon Dhimmoota Komunikeeshinii naannicha fuula Feesbuukii isaa irratti akka maxxansetti lammiileen bilisummaadhaan gara naannichaa akka hin seenneef motummaa federaalaatiin dhorkamaa jiru.
Akka ibsa kanaatti namoonni waltajjii walta’iinsa humnoota federaalistii Itoophiyaa Magaalaa Maqaleetti gaggeefamuuf tureerratti hirmaachuuf gara naannichaa imaaluuf turan Booleetti qabamuun hidhaman.
Ibisichi dabaluunis miseensoonni walta’inichaa shan Obbo Gabruu Bariha, Masfin Shifaraa, Obbo Tashaagar Aragaa, Addee Madiinaa Imaam, Obbo Gu’uush Gabra Silaalee buufata xiyyaara Booleetti qorannoo koronaatu isiniif taasifama jedhamuun erga xiyyaara gara Maqaleetti balalii’u keessaa buufamamanii booda hidhamaniiru.
Kana malees namoonni lama kan obbo Abdii Umariifi Abaas haajii jedhamanis osoo gara Booleetti imalaa jiranii daandiirratti qabamuun hidhamaniiru jechuun maqaa caqaseera.
‘Mootummaan federaalaa maqaa koronaavaayirasiin aangoo dheereffataa jira’
Korri ‘Humnoota Federaalistii’ fooramii hundeessuun goolabame
Naannichi mootummaan Federaala mirgoota lammiilee bilisummaan ijaaramuufi bilisummaan socha’uu cabsuun miseensoota hoggantoota walta’iinsa humnoota federaalistii hidheera jechuun himata.
Akkasumas kana duras dippilomaatoota xiyyaaraa irraa akka bu’aniifi invastaroonni gara Maqalee akka hin deemne taasifamaniiru jechuun taatee kana duraa caqasa.
Waan kana ta’eefu Motummaan Federaalaa taatee kana ilaalchisee tarkaanfii sirreeffamaa barbaachisu fudhachuun kanneen ukkaafman/hidhaman atatamaan akka gadhiisu jechuun waamicha taasiseera.
Kana malees ugguraafi dhorkaa lammiileen bilisummaan akka hin sochooneef taasifamaa jiruu akka dhaabbatuuf gaafateera.
Tibbana naannoon Tigiraay yeroo jedhame keessatti filannoo naannoo akka gaggeessu ibsee ture. Haa tahu malee filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa sababa weerara koroonaavaayirasiin fuulduratti akka siqu murtaa’eera.
Erga MM Abiy gara aangootti dhufanii hariiroon TPLF fi mootummaa federaalaa haala gaarii irra akka hin turre gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama.